Home News Warar kala duwan oo ka soo baxaya Dagaal Ciidamada Dowlada iyo Al-Shabaab...
Warar kala duwan oo ka soo baxaya Dagaal Ciidamada Dowlada iyo Al-Shabaab ku dhexmaray Duleedka Magaalada Kismaayo
Dagaalkaan oo u dhaxeeyay Ciidamo katirsan kuwa Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Jubbaland oo wada jira & Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni oo kamid ah deegaannada hoostaga Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Ciidamada Dowladda & kuwa Jubbaland oo wada howlgallo amniga lagu xaqiijinayey ay weerar kala kulmeen Xubno katirsan Al-Shabaab,sida ay sheegeen Saraakiil katirsan Ciidamada Jubbaland.
Dad ku sugan deegaanka Baar-Sanguuni halkaas oo Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay Saldhig ku leeyihiin ayaa waxaa ay sheegeen in uu jiro dagaalkaas,hayeeshee aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay.
Al-Shabaab ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen in dagaalkaas ay ku dileen 5 Askari 9 kalena ay ku dhaawaceen wallow aysan jiin Warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab.
Wararkii ugu dambeeyey ee saakay aan ka heleyno deegaanka Baar-Sanguuni iyo deegaannada ku dhow dhow ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda & kuwa Jubbaland ay wadaan howlgallo kala duwan oo ka dhan ah Al-Shabaab.
Si kastaba dagaalka ka dhacay deegaanka Baar-Sanguuni ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay Al-Shabaab kala wareegeen Degaannada Kaban, Bangeeni, Maano Muufo, oo 3KM ujirta Degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose.